Izindandatho zesiliva eziyingqayizivele: izizathu ezinhlanu zokuthenga
Lokhu kukhishwa. Isigxobo se-classic sinamaphesenti angama-92, amaphesenti angu-5 esiliva ahlanzekile, ahlanganiswe ngethusi: i-alloy enjalo ayifani nje nokubukeka kwayo ekhangayo, kodwa futhi nokuhlala kwayo okukhethekile. Inhloko isuka esiliva esinezinhlamvu kukhona ubucwebe - ingaba kalula isisekelo sokuqoqwa komndeni, esizuzwe njengefa.
Izinkinobho eziyigugu eziyigugu zamantombazane
Lokhu kungokoqobo. Abadwebi befestile abafuna ukungahambisani nemikhuba yakamuva bangaqinisekiswa: Isiliva enhle kakhulu i-fashion-investment. Khetha isethi yama-laconic ngokufaka ama koqweqwe lwawo obunemibala noma amatshe ayigugu - ukuthandwa kwabo kuhlala kungashintshi.
Isiliva - isitayela sezingubo njalo
Akuyona into enhle. Isiliva singacutshungulwa kalula - yingakho ama-jewelers azama ngokuzithandela, ekwakheni amakhulu wemikhiqizo emihle kakhulu: kusuka kumasongo okuvuleka amancane kanye namasongo ku-polysyllabic imigexo namacici. Uma ufuna umhlobiso omuhle wendwangu yakho - ngokuqinisekile uzoyibona ekuqoqweni kwesiliva.
Isetha esiliva: isitayela nesimanje
Lokhu kuyonke. Ngenxa yokukhethwa okubanzi, ungavuselela ibhokisi lakho lezingubo ngesikhathi sokuqala ngokuthatha amaqoqo we-kezhual-outfits noma izithombe zakusihlwa. Okufanele, akufanele ukhathazeke - amacici, izindandatho nemigexo yesiliva esinezinhlobonhlobo zizogcwalisa ngokugcwele noma iyiphi into.
Ubucwebe beSiliva - imininingwane ecacile yengubo ehloniphekile
Lokhu akuyona inkinga. Amaminerali e-alloy awashukumisi ukusabela okukhulu kwe-allergen - angakwazi ukugqoka ngaphandle kokwesaba ukuzwa okungathandeki. Ngaphezu kwalokho, isiliva esiyingqayizivele ayidingi ukunakekelwa okukhulu - izigqoko ezanele ezanele nezifutho ezikhethekile ukubuyisela umkhiqizo embukisweni wokuqala.
Isiliva i-hypoallergenic futhi iphephile
Imfashini yemfashini, Winter 2015-2016 - isithombe sezimfashini zezimfashini nezindwangu, i-Autumn-Winter 2015-2016
Damiani - ubucwebe nobucwebe besifazane
Izesekeli zokugqoka i-coral
Yeka indlela yokugqoka ukugqoka ibhande ngo-2018: izibonelo ezinhle kunazo zonke ezivela kuma-fashionistas!
U-Agnia Ditkovskite no-Alexei Chadov baqhekeka?
Izinwele zezingane ezinwele ezininde
Isimiso kanye namasu we-chiromassage
Isaladi ye-ithanga neklabishi
Amakhekhe nge-chocolate, i-rice flakes nama-peanut
I-Myopia yezinga eliphansi nokukhulelwa
Imidlalo ye-Sand enkulisa
Indlela yokususa uthando lomuntu
Ukunakekelwa kwePil emva kokudweba
Kungani udonsela esiswini esingaphansi ngesikhathi sokukhulelwa?
Umkhosi we-Princess: funda indlela yokwenza umuthi womntwana
Cocktail of ikhabe kanye ikhabe
Amakhambi omphakathi okwehla kwesisindo, ukuqoqwa kwamakhambi
Okwenza amantombazane akhethe ocebile futhi omuhle